नगर कार्यपालिकाको ३३ औं बैठक: इटहरी ९ मा पार्क सिलान्यास बहुमतबाट पारित — Nepal's First Economic Radio
बिहीबार ५ , मंसिर २०७५ purbodayafm 61
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको बुधवार बसेको बैठकले इटहरी बडा नम्बर ९ मा जनता पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको ३३ आंै बैठकले पार्क निर्माणको अत्याधिक बहुमतले निर्णय गरेको प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले बताए । एक जना सदस्यले भने नोटअफ डिसेन्ट लेखेको उनको भनाइछ ।
बिहीवार इटहरी वडा नम्बर नौ जुट अनुसन्धान तथा रेशम खेती विकास कार्यक्रमको पूर्वी किनारमा जनता पार्क शिलान्यास गर्ने बहुमतको निर्णय गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रेस संयोजक लिलाराज भट्टराईले जानकारी दिए । यो निर्णयसँगै पार्क सिलान्यासबारेको भ्रम हटेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । पार्क सिलान्यासबारे जनप्रतिनिधिहरु नै अन्यौल तथा बिभाजित हुन् कि भन्ने आशंका पनि अब मेटिएको बैठकमा सहभागी एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।
यसैबीच जनता पार्क शिलान्यासको भव्य तयारी भएको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले बताएका छन् । यो पार्कको शिलान्यास १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बिहीवार विहान ८ बजे उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रमुख चौधरीको भनाइछ । शिलान्यास कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन एफएम, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, सामाजिक संजाललगायत बिभिन्न माध्यमबाट व्यापक प्रचारप्रसार गरिएको उनको भनाइछ ।
प्रमुख चौधरीकाअनुसार सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिएको छ । आम इटहरीबासीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण पनि गरिएको छ । सोही ठाउँमा क्रिकेट मैदान पनि भएकोले क्रिकेट क्लबका प्रतिनिधि तथा खेलाडीहरुले प्रमुख चौधरी तथा उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमसँग मंगलबार भेटेर पार्क बनाउन क्रिकेट मैदान के हुन्छ ? भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । क्रिकेट खेलाडी तथा क्रिकेट क्लबका प्रतिनिधिहरुलाई तत्काल क्रिकेट मैदानलाई केही असर नगर्ने गरी पार्क शिलान्यास गर्न लागिएको जवाफ दिएका थिए । पूर्वी हटलाइनसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रमुख चौधरीले भने–‘हाल क्रिकेट मैदान जस्ताको तस्तै रहन्छ, पछि हामी इटहरीमा व्यवस्थित क्रिकेट मैदान बनाउने योजनामा छौं ।’ उनले थपे–‘अहिले हामी क्रिकेट पिच छुदैनौं ।’ प्रमुख चौधरीले अर्को ठाउँमा क्रिकेट खेल मैदान नबनाए सम्मको लागि त्यहाँ खेल सञ्चालनको लागि सहयोग गर्ने बताए । उनले भने–‘नगरपालिका खेलमैत्री छ । खेल विरोधी छैन । पार्क शिलान्यासको लागि उपमहानगरबाट हाललाई ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पार्क तीन महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने प्रमुख चौधरीले बताए । उनले चाँडै इटहरीलाई खेल नगरी घोषणा गरिने पनि बताए । सो सार्वजनिक जग्गाको मूल्य यतिबेला ५० करोडभन्दा माथि छ । सोही ठाउँका स्थानीय युवा एवम् वडा सदस्य अरुण गुरुङ्ग सार्वजनिक जग्गा खोजी र संरक्षणमा सबै एकजुट हुनु पर्ने बताउछन् ।
यो टेंग्रा उकासको जग्गा हो । उच्च स्तरीय वन सुदृढिकरण आयोगले कित्ताकाट गरेको थियो कसैको नाममा दर्ताको लागि तर कुनै पनि व्यक्तिको नाममा चाहि फिल्डबुक तयार नभएको हुनाले अब यो सार्वजनिक जग्गा कसैको नाममा दर्ता हुँदैन । बेदर्तावाल जग्गा जनताको हितमा अथवा सार्वजनिक हितमा नगरपालिकाले प्रयोग गर्न सक्छ र संरक्षण गर्न सक्छ ।
तर त्यो जग्गा इटहरीमा रहेको नेपाल डिभिएम स्कूलले हडपेको उपमहानगरपालिकाको बुझाइछ । भारतीय ट्रष्टको नाममा सञ्चालनमा रहेको सो बिद्यालयले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बर्षौदेखि भोग चलन गर्दै आएको थाहा पाएपछि नगरपालिको गएको बर्ष जग्गा खाली गर्न स्कुललाई भनेको थियो । तर पटक–पटक भन्दा पनि अटेर गरेपछि अहिले पार्क बनाउन लागेको बताइएको छ ।
डा. केसीको रक्तचाप कम हुँदै
बसको ठक्करबाट चित्तलको मृत्यु
उदयपुरमा उपचारको अभाबमा आफैलाई आगो लगाएर आत्मदाह
कोशी टप्पूमा मृत हात्ती फेला
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको आठ महिना पुगिसक्दा एकता प्रकिया टुङ्गो लागेन
‘समर लभ’को टिजर र गित सार्बजनिक